अन्तराष्ट्रिय खबर – Page 11 – rastriyakhabar.com
युएईमा भएको सवारी दुर्घटनामा ६ नेपालीसहित ८ मृत्यु
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा भएको सवारी दुर्घटनामा ६ नेपालीसहित ८ जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय समयानुसार बिहान ४ बजे ५४ मिनेटमा दुबईको सेख मोहम्मद विन जायद सडकमा फस्र्ट सेक्युरिटी ग्रुपको मिनिबस एक लरीसँग ठोक्किएर दुर्घटना भएको हो । १४ सिटे उक्त मिनिबस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा ६ जना..
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उपाध्यक्ष कुमार पन्तले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनले काठमाडौंमा कार्यक्रमको आयोजना गरी नयाँ कार्यकालका लागि अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । एनआरएनमा स्थापनाकालदेखि सक्रियतापूर्वक लाग्दै आएका पन्त यूरोप संयोजक हुँदै आइसिसी..
बेलायतमा कसले चोर्यो सुनको शौचालय ?
लण्डन । बेलायतका तत्कालीन चर्चित नेता विन्स्टन चर्चिलको जन्म घरमा रहेको १८ क्यारेट सुनको शौचालय शनिबार बिहान चोरी भएको छ । शनिबार बिहान ४ः५० मिनेटमा शौचालय चोरी भएकोमा प्रहरीले ४ः५७ मा खबर पाएको थियो । चर्चिलको जन्म घरलाई ब्लेनहिम प्यालेस भन्ने गरिएको छ । थेम्स प्रहरीका अनुसार, सो शौचालय नपाइएपनि..
कति पैसा बोकेर हिँड्छन् मुकेश अम्बानी ?
धिरूभाई अम्बानीका ठूला छोरा मुकेश अम्बानी ‘अलिबाबा’का संस्थापक ज्याक पछिका सबैभन्दा धनि व्यक्तिको सूचिमा रहेका छन् । त्यसोत ‘अम्बानी’ खानदाको मतलव पैसा नै पैसा हो । सामाजिक सञ्जालमा उनी निकै भाइरल भइरहन्छन् । मुकेश अम्बानी ‘राजखानदान’ को जस्तै जीवनयापन गर्न रुचाउँछन् । उनको घर पनि राजमहल जस्तै..
अमेरिकामा सवारी दुर्घटना परि तीन नेपालीको मृत्यु
बोस्टन । अमेरिकाको मिजुरी राज्यमा मंगलबार भएको सवारी दुर्घटनामा तीन नेपालीको मृत्यु भएको छ। स्थानीय जोप्लिन प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा श्रद्धा खनाल ओझा, उनका बुबा गोविन्द खनाल र आमा शान्ता खनाल छन्। उनका बुबारआमा अमेरिका घुम्न नेपालबाट आएका हुन्। कार चालक श्रद्धाका पति प्रभाश ओझा र उनीहरूका ४..
नेपाली समाज यूएईका आसन्न निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिए भुर्तेलले,उनको उम्मेदवारीको यूएईमा सर्वत्र चर्चा
पर्वत । नेपाली समाज यूएईको अधिवेशन मार्फत अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका मणि भुर्तेलको चर्चा चुलिएको छ । । उनको उम्मेदवारीको यूएईमा सर्वत्र चर्चा हुन थालेको छ । समाजको २०१९–०२१ कार्यकालको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आगामी सेप्टम्बर ६ का दिन अधिवेशनको मिति तय गरिएको छ । भुर्तेल सँगै अध्यक्ष पदमा गोविन्द..
अमेरिकाको टेक्ससमा फेरि बन्दुकधारीको आक्रमण: कम्तिमा पाँच जनाको मृत्यु, २१ घाइते
एजेन्सी । अमेरिकाको टेक्ससमा बन्दुकधारीको आक्रमणमा कम्तिमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । २१ जना भन्दा धेरै घाइते भएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । दुईजना बन्दुकधारीले फायरिङ्ग गरेका थिए । सुरक्षाकर्मीको तवाफी आक्रमणमा एक आक्रमणकारी मारिएका छन् । अमेरिकाको टेक्सस र ओहियामा एक..
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) बेलायतको चुनावको मिति नजिकिदैं गर्दा महिला संयोजकमा क्षमता ढकालको सम्भावना बढी देखीएको छ । निडर र हक्की स्वभाव हुनुले मात्रै हैन बेलायतमा रहेका नेपाली समुदाय माझ स्थापित भै सकेकी ढकालको महिला प्रतिको दृष्ट्रीकोण बदल्ने बेला भएको आबश्यक भएको कुरा ब्यबहारिक रुपमा परिणत..
बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री मिश्रको निधन
एजेन्सी । भारतस्थित बिहार राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री डा. जगन्नाथ मिश्रको निधन भएको छ । लामो समयदेखि अस्वस्थ रहेको मिश्रको दिल्लीमा निधन भएको जनाइएको छ । तीन पटकसम्म बिहारको मुख्यमन्त्री रहेका सिंहको ८२ वर्षको उमेरमा सोमबार निधन भएको हो । सन् १९७५ मा मिश्र पहिलोपटक बिहारको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।..
२२१ जना केटासँग प्रेम असफल भएपछि यि युवतीले गरिन् कुकुरसँग बिवाह
एजेन्सी । संसारमा निकै अचम्म लाग्दा घटना सुन्न पाइन्छ । बेलायतकी एक जना पूर्वमोडलले गरेको हर्कतको अहिले चर्चा भइरहेको छ । ति पुर्व मोडलले २२१ जना केटासँगको प्रेम असफल भएपछि कुकुरसँग बिहे गरेकी छन् । इलिजावेथ होडले टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणमा आफूले पालेको कुकुरसँग विवाह गरिन् । ४९..
अमेरिकामा ग्रीन कार्ड पाउन गाह्रो, नीतिमा कडाइ गर्दै ट्रम्प
बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गरिब आप्रवासीहरूका निम्ति भिसा अवधि लम्ब्याउन तथा स्थायी बासिन्दाको हैसियत वा ग्रीन कार्ड प्रदान गर्न झन् कठिन पार्ने नीति ल्याउन लागेको छ। सो नीतिले एक वर्षभन्दा बढी समय खानेकुरामा सहुलियत वा सार्वजनिक आवास सुविधा जस्ता सरकारी सहुलियत..
भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजको निधन
काठमाडौं । भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजको निधन भएको छ। ६६ वर्षको उमेरमा उनको मंगलबार राति निधन भएको हो। भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार मुटुमा समस्या देखिएपछि उनलाई नयाँ दिल्लीको एम्स अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। प्राप्त समाचारमा जनाइएअनुसार उनको उपचारकै क्रममा अस्पतालमै..
युरोपेली मुलुकहरुमै ठूलो मानिएको जर्मन डच बैंकको घाटा ३ अर्ब ६० करोड डलर
एजेन्सी । जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बैंक डच बैंकको दोस्रो चौमासिकमा तीन अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर ९३ अर्ब २० करोड युरो खूद नोक्सानी भएको छ । पुनर्संरचनाका क्रममा रहेको उक्त बैंक युरोपेली मुलुकहरुमै ठूलो मानिन्छ । बैंकका कार्यकारी प्रमुख क्रिस्चियन सेविङ्गले एक वक्तव्य प्रकाशन गरी डच..
मङ्लबार, साउन ७, २०७६ मा प्रकाशित
अफगानिस्तानको दक्षिण भागमा पर्ने हेलमाण्ड प्रान्तको मार्जा जिल्लामा तालिबान लडाकू समूह लुकेर बसेका इलाका लक्ष्यगरी गरिएको हवाइ आक्रमणमा एक समूह कमाण्डरसहित तीन तालिबान लडाकू मारिएका छन् । अफगान सेनाले मङ्गलबार प्रकाशित एक विज्ञप्तिमा उक्त जानकारी दिएको छ । जारी विज्ञप्तिका यस हवाइ आक्रमणमा..
१९ वर्षकी युवतीलाई ११ जनाले रेप गरेर बनाए भिडियो
एजेन्सी । १९ वर्षकी एक केटीलाई आफ्नो साथीको कोठामा गएका बेलामा ११ जनाले बलात्कार गरेर भिडियो बनाएका छन् । यो घटना साइप्रसको हो । बेलायती एक युवती साइप्रसको रिसोर्टमा बसेकी थिइन् । आफ्नो एक केटासाथीको पुगेका बेला ११ जना अरु साथी आएर आफूलाई बलात्कार गरेको ती केटीले बताएकी छन् । १२ जना विरुद्ध नै उनले..